Mitaraina ny tany | NewsMada
Efa ho herinandro maromaro izao, tsy nilatsaka ny orana teto an-dRenivohitra sy ny manodidina raha misy ihany ny any amin’ny faritra hafa nefa ao anatin’ny fahavaratra isika izao. Misy vokany ratsy eo amin’ny fambolena io haintany mety mandalo ihany io. Tara ohatra ny ketsa na koa maina eo an-toerana eo. Tsy mbola voafehy tanteraka ny fanondrahana ny tanimbary fa miankina amin’ny rotsak’orana. Madagasikara anisan’ireo tany iharan’ny fiovaovan’ny toetr’andro. Na nanaiky sy nanao sonia ny Cop 21 tao Parisy aza, tsy ho afa-bela amin’ny ataon’ny firenena hafa toy an’i Sina sy Etazonia izay mandoto tanteraka ny tontolo iainana amin’ny etona sesilany avoakan’ireo orinasa marobe any aminy. Ny fiarakodia mameno ny arabe eto amintsika manginy fotsiny.
Isika Malagasy variana amin’ny seminera saika isan-kerinandro handinihana ity olana mety handovan’ny taranaka tany ngazana ity any aoriana. Tsy misy fanarahana ny fehin-kevitra nivoaka tao fa mijanona ho tahirin-kevitra feno vovoka any ho any fotsiny izay tapaka tamin’ny fivoriana. Ohatra ny etona fandrehitra vesaran’ny hetra 25% ny vidiny ka zara raha ny fianakaviana manan-katao no mampiasa azy. Ny maro an’isa mirohotra any amin’ny saribao, sady mandoto no manimba ny ala sisa tavela, tapa-porohana sisa tsy main’ny doro tanety. Fomba izay hita ny maharatsy azy saingy toa zary fahazarana tsy hay esorina. Ny fanjakana nilaza fa hofaizina mafy izay tratra manao izany. Hatreto aloha, tsy mbola nisy nahazo sazy henjana araka ny nolazaina. Efa firy ny fanentanana natao ny amin’ny tokony hiarovana ny tontolo iainana saingy ny sasany aza mitrandraka vatosoa ao anaty valanjavaboahary voaaro. Ireo mba mahasahy miteny indray no tratry ny antsojay.
Fehiny tsy mbola mahataitra ny Malagasy ny loza mitatao vokatry ny fahasimban’ny tontolo iainany. Kanefa noho ny tsy fisian’ny rano, miverina indray ny delestazy. Inona indray no handrasana vao ho tonga saina!